Disney waxay cusbooneysiineysaa buugeeda laga heli karo iTunes Store ilaa 4K bilaash | Waxaan ka socdaa mac
Adeegyada fiidiyowga ee socda ayaa noqday habka ugu raaxada badan ee loo isticmaalo nooc kasta oo ka mid ah waxyaabaha, gaar ahaan hadaan ka hadalno taxanaha. In kasta oo ay run tahay in labada Netflix iyo Apple TV + ay sidoo kale na siinayaan buug-gacmeed ballaadhan oo aflaanta asalka ah, haddana kani ma aha wanaaggooda ugu weyn, sidaa darteed waxaa nagu qasbay inaan u leexanno iTunes Store
Haddii aan ka hadalno iTunes Store, waa inaan ka hadalnaa Disney. Rafaaladda madadaalada ayaa hadda cusbooneysiisay ku dhowaad dhammaan buug-yaraha laga heli karo kirada filimka Apple iyo iibsashada ku darista taageerada 4K iyo HDR tayada, isla qiima la mid ah illaa iyo hadda, sidaa darteed haddii aad horeyba u iibsatay mid ka mid ah filimadooda tayada HD, nooca 4K hadda waa bilaash.
Disney waxay cusbooneysiisay xalinta inta badan filimadooda laga heli karo iTunes Store si bilaash ah, sidoo kale shirkadaha kale ee wax soosaarka oo iyaguna ku bixiya waxyaabaha ay ka kooban yihiin dukaanka Apple.
The Star Wars, Toy Story, Baabuurta gawaarida… waa qaar ka mid ah filimada horeyba loogu heli jiray 4K, hase yeeshe qaar ka mid ah Filimada layaabka leh ayaa wali lagu heli karaa oo keliya xallinta HD. Si loo hubiyo in filimka aad jeceshahay laga heli karo 4K, waa inaan marin ka helno buugga laga heli karo barnaamijka Apple TV ee ka socda Apple TV ama iOS, oo aan raadino magaca filimka.
Calaamadaha filimka, 4K ayaa lagu soo bandhigi doonaa haddii filimku horeyba ugu jiray xalkan. Sannadkii 2017, markii la bilaabay Apple TV 4K, Apple waxay ku dhawaaqday in kaydka ugu badan laga heli karo iTunes Store la casriyeyn lahaa in 4K xal for freeDisney oo ah tan kaliya ee aan cusbooneysiin nuxurkeeda, sida iska cad sababta oo ah waxay u keydsaneysay ikhtiyaarkaas adeeggeeda fiidiyoowga ah.
Inkasta oo muuqaalkan markii hore laga bilaabay Maraykanka, waxay u muuqataa taas tartiib tartiib ayey ugu sii fideysaa wadamo badan, markaa waqti ayey qaadan doontaa inta aan laga helin sidoo kale dalkeena.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Disney waxay cusbooneysiineysaa buugeeda laga heli karo iTunes Store ilaa 4K bilaash
Maanta mar hore ayaa laga heli karaa iTunes Spain, tusaale ahaan dhammaan kuwa ka socda Star Wars, ama The Little Mermaid, kuwa kale weli ma aysan soo gaarin sida Burcad Badeedda Kariibiyaanka ama qaar badan oo ka yimid Pixar